प्रचण्डमाथि लगाइयो यस्तो गम्भीर आरोप, प्रतिवाद गर्लान् ? -
प्रचण्डमाथि लगाइयो यस्तो गम्भीर आरोप, प्रतिवाद गर्लान् ?
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पाँच महिने अभियान सुरु गरेको बताएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियान सुरु भएको जानकारी दिएका छन । प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै असारदेखि कात्तिकसम्म सञ्चालन हुने आर्थिक अभियानमा सहयोग गर्न आम जनसमुदायमा अपिल समेत गरेका छन ।
प्रवक्ता प्रकाण्डले आर्थिक सहयोग अभियानमा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका र भगौडाहरुसँग सचेत रहन अपिल गरेका छन । उनले ने.क.पा.ले आगामि कार्तिकसम्म चल्ने अभियानलाई पार्टीले कारबाही गरेका र भगौडाहरू तथा अराजकतावादीहरूले दुरुपयोग गर्नसक्ने खतराप्रति सतर्क रहन अपिल समेत गरेका छन ।
प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल यतिबेला जनक्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको भीषण टक्करबाट गुज्रिरहेको छ । १० वर्षको महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनअधिकार र उपलब्धिहरूलाई वली–बादल कम्पनीले ध्वस्त पार्दै गएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उत्तरसाम्राज्यवादको गोटी बनेर धरापमा पारिरहेको छ । २००७ सालदेखिका सशस्त्र सङ्घर्ष, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई तथाकथित कम्युनिष्ट आवरणमा हमला गरिरहेको छ । त्यसका विरुद्धको प्रतिरोधलाई सामाजिक दलाल फासिवादी हर्कतद्वारा निस्तेज पार्ने र कुल्चने भयानक जोखिम पैदा गर्दै गएको छ । जनताका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई बन्दुकको बलमा दबाउन खोजेको छ । उनीहरूबाहेक अरू कोही राजनीतिक पार्टी र शक्ति होइनजस्तो गरी सबैको अस्तित्व नामेट पार्न खोजिएको छ । जसले संसारका सबै भ्रष्ट, तस्कर, कमिसनखोर तानाशाह र प्रतिक्रियावादी शासकहरूलाई उछिनेको छ । राजनीतिक असहमति राख्ने निशस्त्र र राजनीतिक कार्यकर्तालाई शान्ति र विकासविरोधी आरोपमा हत्या गरेको छ । हत्या, बलात्कार र लुटपाट गर्नेलाई मन्त्रीका नाता–गोता र वली सरकारको गृह प्रशासनले संरक्षण गरिरहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय पुँजी तथा उद्यमी–व्यवसायीहरू एकाधिकार पुँजी, दलाल पुँजीपति वर्ग, भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरूको निशानामा परेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् । सामाजिक असुरक्षा भयावह छ । मूल्यवृद्धि २ सय प्रतिशत नाघेको छ । बेरोजगारी समस्याले युवाहरू आक्रान्त छन् र बिदेसिन बाध्य भएका छन् जसको कारण देश र जनताको जीवन इतिहासमै सर्वाधिक जोखिममा परेको छ । यी सबै अपराधकर्म दुई तिहाइ बहुमतको बकबासमा गरिरहेको छ । यसले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूलाई मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाईसमेत आजित बनाएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा गरेको सङ्घर्ष र सामाजिक अभियन्ताहरूले चलाइरहेको सडक आन्दोलन त्यसैको अनिवार्य परिणाम हो ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०६२–०६३ को आन्दोलनको प्रक्रियामा शान्ति वार्ताका नाममा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र षड्यन्त्र, संसदीय यथास्थितिवाद र प्रचण्डको आत्मसमर्पण, विचलन पलायन र गद्दारीका विरुद्ध हामीले जीवनमरणको सङ्घर्ष गर्दै आयौँ । राष्ट्रिय राजनीति र प्रचण्डमा देखापरेको प्रतिक्रान्ति र गद्दारीकाविरुद्ध २०६९ असारमा हामीले सङ्गठित विद्रोह गर्‍यौँ । २०७१ मङ्सिर ८ गतेदेखि ५ वर्षयता हामीले एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशामार्फत नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका छौँ ।’